Ubophele noLindani Gumede kwicwecwe elisha owase-Bulwer – Isambane News
Home > Entertainment > Ubophele noLindani Gumede kwicwecwe elisha owase-Bulwer
Ubophele noLindani Gumede kwicwecwe elisha owase-Bulwer
July 11, 2018 Isambane News
SamaJobe Zulu – Ungene kwezwakala endimeni yezomculo uSibonelo Zaca (25) wase-Bulwer endaweni yakwa-Mnyane. UZaca ucula umculo wokholo athi waqala ukubona ikhono lwawo ngonyaka ka-2008, lapho wayecula khona neqembu elaziwa nge-Stars of God. Leli qembu elinezinsizwa ezingu-8 selikhiphe amacwecwe amathathu njengoba lilungisela eyesine ezophuma kulonyaka. Leli qembu lisebenzisane kakhulu nomdidiyeli womculo wokholo owaziwayo nophinde abe ngumculi uLindani Gumede.
Njengamanje basebenzisana noMbo Khawula kwezophuma ngiZibandlela kuwona lo nyaka. Ngonyaka odlule ube esekhetha ukuzimela njengoba ngasekupheleni konyaka odlule, ngoLwezi ededele icwecwe lakhe lokuqala elisihloko esithi ‘Hamba Nami’. Ngokusho kwakhe uthi kuyona usebenzisane no-TQ Phewa, Sanele Ndlovu kanye noKhanyi Nzuza. “Bayithokozela kakhulu abantu le-album ngendlela eyisimanga, lokho ngikubone ngokudlalwa komculo wami emisakazweni yomphakathi kanye nemicimbi esengibe ingxenye yayo,” kubeka yena.
Uthi useke washiyelana inkundla nezingqungqulu ezifana naboNathi noNkanyiso, Jumbo, Mthokozisi Zakwe, Ndoda Maphumulo nabanye nje abaningi. Kuyimanje uthi umatasa nelinye icwecwe elizophuma kulonyaka ngoNovember. Kuyona uthi uzosebenzisana noLindani Gumede kwenye yezingoma, Phendulani Chiya kanye no princess Khanyani. “Ngendlela umsebenzi wami othandwa ngakhona, ngibonga umdali ngendlela izinto ezenzeka ngayo. Ungaze uthi nginomuntu ongiphethe kanti cha umusa nje kaNkulunkulu,” kuphetha yena. Uthi ukhonza e-Christ Apostles eholwa ubaba uVelisile Nene. Uthi eminyakeni emibili ezayo ubona umculo wakhe udlalwa emisakazweni emikhulu, sekukhona nomuntu omphethe okunguye amdingayo njengamanje. Ebuzwa ukuthi ngabe usayingxenye yeqembu i-Stars of God, uthe yebo njengoba eqala amaculo kanti futhi nguye ovuma indlela yokuqala eqenjini.Ubophele noLindani Gumede kwicwecwe elisha owase-Bulwer
Uthi useke washiyelana inkundla nezingqungqulu ezifana naboNathi noNkanyiso, Jumbo, Mthokozisi Zakwe, Ndoda Maphumulo nabanye nje abaningi. Kuyimanje uthi umatasa nelinye icwecwe elizophuma kulonyaka ngoNovember. Kuyona uthi uzosebenzisana noLindani Gumede kwenye yezingoma, Phendulani Chiya kanye no princess Khanyani. “Ngendlela umsebenzi wami othandwa ngakhona, ngibonga umdali ngendlela izinto ezenzeka ngayo. Ungaze uthi nginomuntu ongiphethe kanti cha umusa nje kaNkulunkulu,” kuphetha yena. Uthi ukhonza e-Christ Apostles eholwa ubaba uVelisile Nene. Uthi eminyakeni emibili ezayo ubona umculo wakhe udlalwa emisakazweni emikhulu, sekukhona nomuntu omphethe okunguye amdingayo njengamanje. Ebuzwa ukuthi ngabe usayingxenye yeqembu i-Stars of God, uthe yebo njengoba eqala amaculo kanti futhi nguye ovuma indlela yokuqala eqenjini.
Ubulawe ekade eyokweba nabo
Umphakathi uwabanga nemfuyo amanzi